Turkiga Iyo Qatar oo Galay Heshiiskii Ugu Weynaa,Militaryga,Dhaqaalaha iyo Istaraatijiyada Gobolka - Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia
HomeMaqal Iyo MuuqaalTurkiga Iyo Qatar oo Galay Heshiiskii Ugu Weynaa,Militaryga,Dhaqaalaha iyo Istaraatijiyada Gobolka
November 27, 2020 marqaan Maqal Iyo Muuqaal, Wararka Maanta 0
Amiirka Dowladda Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, ayaa sheegay in isaga iyo Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan, ay caasimadda Turkiga ee Ankara ku wada qaateen wareeg guul ah oo ku saabsan wada-shaqeynta Qatar iyo Turkiga.
Amiirka Qatar wuxuu ku daray qoraal uu soo dhigay bartiisa rasmiga ah “” maanta, Khamiista: “Waxaan ku heshiinay karti badan oo labadeena dal ah si aan u xoojino iskaashigan, kaasoo si joogto ah ugu socda wanaag iyo maslaxada dadkeena. Waxaan sidoo kale is dhaafsanay aragtiyo dhowr ah oo ku saabsan arrimaha gobolka iyo caalamka iyo horumarka.”
Madaxweynaha Turkiga ayaa dhankiisa ku yiri qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka: “Maanta waxaan kulan wax ku ool ah la yeelanay walaalkeyga qaaliga ah, Amiirka Qatar, Sheikh Tamim iyo wafdiga la socda, waxaan kala saxiixannay heshiisyo dhowr ah.”
Wuxuu intaas ku daray, “Waxaan sii wadi doonnaa inaan xoojino wada-jirkeenna dhinacyada oo dhan oo aan la yeelanno shacabka aan walaalaha nahay ee Qatar, kuwaasoo aan la leenahay xiriir saaxiibtinimo oo adag.”
Intii lagu guda jiray booqashadii Sheikh Tamim bin Hamad, Turkey waxay soo gabagabeeyeen 10 heshiis oo dhinacyo kala duwan ah, xaflad ay ka soo qeyb galeen madaxda labada dal, waxaa u sii dheer ku dhawaaqista sanduuqa maal-gashiga madaxbanaanida Turkiga oo heshiis is-afgarad la saxiixday Hay’ada Maalgashiga Qatar.
Saraakiisha labada dhinac waxay kala saxiixdeen heshiisyo dhinacyo kala duwan leh, haba ugu Xooganaato: maalgelinta wadajirka ah ee mashruuca “Golden Horn” ee Istambuul, Isweydaarsiga saamiyada, iyo waxqabadyada wadajirka ah ee dhiirrigelinta ee aagagga xorta ah.
Heshiisyada waxaa ka mid ahaa in la sameeyo guddi isku dhaf ah oo ka shaqeeya dhaqaalaha iyo ganacsiga, iskaashiga dhinaca maamulka biyaha, xoojinta iskaashiga dhaqaalaha, iyo iskaashiga dhinacyada qoyska, haweenka iyo adeegyada bulshada.
Wasiirka Arrimaha Dibadda ee Turkiga Mevlut Cavusoglu iyo dhiggiisa Qatar, Muhammad bin Abdul Rahman Al Thani, ayaa sidoo kale kala saxiixday Heshiiskii Ugu Danbeeyey ee Guddiga Istaraatiijiyadda Sare ee labada dal.
Heshiiska isfahamka ee u dhexeeya sanduuqa hantida qaran ee Turkiga iyo Hay’adda Maalgashiga Qatar, kaas oo Turkiga” u wareejin doono 10% saamigiisa Suuqa Istambul ee “Maalgashiga Qatar”.
Heshiiska isfahamka ayaa waxaa u saxiixay Agaasimaha Fulinta ee Sanduuqa Maalgashiga Turkiga, Zafar Sonmaz, iyo dhiggiisa Hay’adda Maalgashiga Qatar, Mansour bin Ibrahim Al Mahmoud, xaflad lagu qabtay Dhismaha Madaxtooyada ee caasimadda, Ankara, sida lagu sheegay bayaan ay soo saartay “Turkiga.”
Bayaanka ayaa lagu muujiyey in heshiiska isfahamka uu ka mid yahay iskaashi mustaqbalka dhexmara hay’adaha Turkiga iyo Qatar ee maamulka is-weydaarsiga saamiyada .
Shir-madaxeedkan ayaa noqonaya kii 28-aad ee dhexmara Madaxweyne Erdogan iyo Amiir Tamim muddo 70 bilood gudahood ah, taas oo taariikh u ah taariikhda xiriirka labada dal, iyo laga yaabee taariikhda xiriirka caalamiga, maadaama 52 heshiis iyo is-afgarad ay gaareen labada dhinac.
Arbacadii la soo dhaafay, Safiirka Turkiga ee Qatar, Mustafa Koksu, ayaa shaaca ka qaaday in ka badan 8 heshiis oo cusub ay kala saxiixan doonaan labada dal, inta lagu guda jiro kulanka lixaad ee Guddiga Wadajirka Istaraatiijiyadda Sare ee Ankara.
“Heshiisyadan oo Sidoo Kale Weheliyeen iskaashiga milatari ee difaaca, iskaashiga dhaqaalaha iyo warshadaha, marka lagu daro dhinaca ganacsiga caalamiga ah, aagagga xorta ah iyo sidoo kale heshiis ku saabsan arrimaha Islaamka, diinta iyo arrimaha qoyska,” sida ay sheegtay wakaaladda Anadolu, Cocso ayaa sharraxday.
Waxaa xusid mudan in Guddiga Istiraatiijiyadda Wadajirka ah ee Wadajirka ah ee u dhexeeya Qatar iyo Turkiga la sameeyay 2014.
Xiriirka Turkiga iyo Qatar ayaa markhaati ka ah horumar sii kordhaya iyo iskaashi joogto ah oo heerar kasta leh, iyadoo ay jirto jiritaanka is-afgarad siyaasadeed oo weyn oo u dhexeeya labada dal iyo heshiis is-afgarad ku saabsan arrimo badan oo gobolka iyo caalamka ah, gaar ahaan gobolka Bariga Dhexe
Turkiga iyo Qatar waa saaxiibo istiraatiiji ah oo iska kaashanaya arrimo badan oo ku saabsan labada dhinac, heer gobol iyo heer caalami, maaddaama xiriirka labada dal uu soo arkay horumar la taaban karo sannadihii la soo dhaafay ku dhowaad dhammaan dhinacyada.
Xiriirka Qatar iyo Turkiga wuxuu bilaabay inuu weji sare iyo xoog leh u yeesho soo gelitaanka xiisadda Khaliijka, bishii Juun 2017, markii Ankara ay taageero weyn u muujisay Doha oo ay diidday tallaabooyinka ciqaabta ee laga qaaday.
Wax yar ka dib markii uu dillaacay xiisadda Khaliijka, Qatar waxay saldhig militari u furtay Turkiga dhulkeeda, dhaqdhaqaaqyo wada jir ah ayaa la qabtay, waxaana la saxiixay heshiisyo ogolaanaya in ciidamada Turkiga la geeyo dhulka Qadar.
Dhinaca dhaqaalaha, Turkiga wuxuu u fuulay buundada hawada Qatar si uu u magdhabo yaraanta suuqa Qatar iyadoo kumanaan tan oo raashin ah ay soo mareen maraakiibta xamuulka iyo diyaaradaha Turkiga.
Dalka Qatar waxaa ka shaqeeya 500 oo shirkadood oo Turki ah, oo ay ku jiraan ilaa 242 shirkadood oo leh Qatar iyo caasimada Turkiga, iyo 26 shirkadood oo leh 100% caasimada Turkey.Qadar sidoo kale waxay qabataa bandhig sanadle ah “Turkey Expo in Qatar” oo ay ka soo qayb galaan boqolaal shirkado Turki ah oo doonaya inay ka shaqeeyaan suuqa Qatar.
Wararkii Ugu Dambeeyay Dagaalada Itoobiya : Xaaladda Oo Faraha Ka Sii Baxeysa